ချစ်သူကို ဓားနဲ့ထိုးပြီးနောက်၊ သေမှာစိုးလို့ ဖက်ပြီးငိုယိုနေတဲ့ အမျိုးသမီး...! - Thadin
[ May 19, 2019 ] LED မီးတွေဟာ မျက်စိကွယ်တဲ့အထိ အမြင်အာရုံကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်…! HEALTHY
[ May 19, 2019 ] ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ရင် အတိုက်ခံရသူ သေဆုံးသွားသည့်တိုင်အောင် ထွက်မပြေးပဲ ဒီအတိုင်းဆက်လုပ်ပါ…! KNOWLEDGE
[ May 19, 2019 ] နိုင်ငံခြားသူတွေရဲ့ မိုက်ရိုင်းမှုကို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူ (ဗွီဒီယိုဖိုင်) NEWS
[ May 19, 2019 ] စိတ်ထား မပြည့်ဝတဲ့သူ (EQ နိမ့်တဲ့သူ) တွေရဲ့လက္ခဏာရပ်မျာ KNOWLEDGE
HomeNEWSချစ်သူကို ဓားနဲ့ထိုးပြီးနောက်၊ သေမှာစိုးလို့ ဖက်ပြီးငိုယိုနေတဲ့ အမျိုးသမီး…!
ချစ်သူကို ဓားနဲ့ထိုးပြီးနောက်၊ သေမှာစိုးလို့ ဖက်ပြီးငိုယိုနေတဲ့ အမျိုးသမီး…!
March 15, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on ချစ်သူကို ဓားနဲ့ထိုးပြီးနောက်၊ သေမှာစိုးလို့ ဖက်ပြီးငိုယိုနေတဲ့ အမျိုးသမီး…!
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၊ Hotel La Cascada ဟိုတယ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ ဗိုက်ကို ဓားနဲ့ထိုးခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးသားကို ချစ်သူဖြစ်သူ အမျိုးသမီးက ကြောက်လန့်တကြား ပွေ့ဖက်ငိုယိုပြီး၊ “ရှင် မသေပါနဲ့ဦး … ကျွန်မကို ခွင့်လွှတ်ပါ … ရှင် သေလို့မရဘူး “ဆိုပြီးအော်ဟစ် ငိုယိုနေပါတယ်။
မျက်မြင်သက်သေတစ်ဦးရဲ့ ပြောကြားချက်အရ အဲဒီအမျိုးသားကို သူမကိုယ်တိုင် ဓားနဲ့ထိုးခဲ့တာပါတဲ့။
ဓားနဲ့ထိုးခံရသူမှာ Erick Omar လို့ သိရပြီး၊ သူရဲ့ချစ်သူကတော့ Sonia Amayrani Nunez Aguilar လို့ သိရပါတယ်။ သူမဟာ ချစ်သူကို သေစေချင်လို့ ဓားနဲ့ထိုးခဲ့တာဖြစ်သလို၊ အခြားတစ်ဖက်ကလည်း သူမ သူ့ကို ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း ပါးစပ်က တဖွဖွပြောနေတာပါ။ Sonia ဟာ အသက်(၂၂)နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ သူမကို Erick က အရင်ရိုက်လို့ ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်မိတာလို့ ပြောပါတယ်။
Sonia က ” သူကအရင် ကျွန်မကို ရိုက်တာပါရှင် … သူက ကျွန်မကို သတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာပါ … “လို့ ပါးစပ်ကနေ အော်ပြီးပြောသလို၊ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိထားတဲ့ ချစ်သူ Erick ကိုလည်း “ရှင် သူတို့ကြားအောင် ပြောလိုက်ဦးလေ … ကျွန်မကို ခွင့်လွှတ်ပါ … ကျေးဇူးပြုပြီး မသေပါနဲ့ “လို့ အော်ပြန်ပါတယ်။ Erick ဟာ သွေးတွေ ဒလဟောထွက်နေတဲ့ ဒဏ်ရာကို လက်နဲ့ဖိထားရင်း-
” သူမက ကျွန်တော့်ကို သတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာပါ … အကူအညီ ခေါ်ပေးကြပါ “လို့ ဘေးကနေ ရပ်ကြည့်နေသူတွေကို အကူအညီတောင်းသလို၊ Sonia က ” မဟုတ်ဘူး … ရှင့်ကို ကျွန်မ သတ်ဖို့မကြိုးစားခဲ့ဘူး … ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရှင့်ကို ချစ်လို့ပေါ့ … ရှင့်ကို ဘယ်တုန်းကမှ ဒီလိုမလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး … ရှင်က ကျွန်မကို အရမ်းနှိပ်စက်တယ် “လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
Erick က ” ဘုရားသခင်ပဲ အပြည့်အစုံ သိလိမ့်မယ် “လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ မကြာမီမှာ ရဲကားတစ်စီးရောက်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ အင်အားနည်းတဲ့အတွက် ဓားထိုခံရတဲ့လူကို ဆေးရုံပို့ပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်ထပ် တစ်နာရီလောက်နေမှ လူနာတင်ကား ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး၊ လူနာကို ဆေးရုံတင်ခဲ့တာပါ။
ဆေးရုံမှာ Erick ကို အရေးပေါ်ခွဲစိတ် ကုသပေးခဲ့တာကြောင့်၊ အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ဓားနဲ့ထိုးတဲ့ Sonia ကို ရဲက ဖမ်းဆီးထားပြီး၊ စစ်ဆေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Erick ဟာ အသက်(၂၉)နှစ်အရွယ်လို့ သိရပြီး၊ အခုတော့ ဆေးရုံမှာ စိတ်ချရတဲ့အနေအထားလို့ သိရပါတယ်။
credit – Myanmarnote
မက်ကဆီကိုနိုငျငံ၊ Hotel La Cascada ဟိုတယျရဲ့အပွငျဘကျမှာ အမြိုးသားတဈယောကျဟာ ဗိုကျကို ဓားနဲ့ထိုးခံခဲ့ရပါတယျ။ အဲဒီအမြိုးသားကို ခဈြသူဖွဈသူ အမြိုးသမီးက ကွောကျလနျ့တကွား ပှဖေ့ကျငိုယိုပွီး၊ “ရှငျ မသပေါနဲ့ဦး … ကြှနျမကို ခှငျ့လှတျပါ … ရှငျ သလေို့မရဘူး “ဆိုပွီးအျောဟဈ ငိုယိုနပေါတယျ။
မကျြမွငျသကျသတေဈဦးရဲ့ ပွောကွားခကျြအရ အဲဒီအမြိုးသားကို သူမကိုယျတိုငျ ဓားနဲ့ထိုးခဲ့တာပါတဲ့။
ဓားနဲ့ထိုးခံရသူမှာ Erick Omar လို့ သိရပွီး၊ သူရဲ့ခဈြသူကတော့ Sonia Amayrani Nunez Aguilar လို့ သိရပါတယျ။ သူမဟာ ခဈြသူကို သစေခေငျြလို့ ဓားနဲ့ထိုးခဲ့တာဖွဈသလို၊ အခွားတဈဖကျကလညျး သူမ သူ့ကို ဘယျလောကျခဈြကွောငျး ပါးစပျက တဖှဖှပွောနတောပါ။ Sonia ဟာ အသကျ(၂၂)နှဈဖွဈပွီး၊ သူမကို Erick က အရငျရိုကျလို့ပွနျပွီးတိုကျခိုကျမိတာလို့ ပွောပါတယျ။
Sonia က ” သူကအရငျ ကြှနျမကို ရိုကျတာပါရှငျ … သူက ကြှနျမကို သတျဖို့ ကွိုးစားခဲ့တာပါ … “လို့ ပါးစပျကနေ အျောပွီးပွောသလို၊ ဒဏျရာပွငျးထနျစှာ ရရှိထားတဲ့ ခဈြသူ Erick ကိုလညျး “ရှငျ သူတို့ကွားအောငျ ပွောလိုကျဦးလေ … ကြှနျမကို ခှငျ့လှတျပါ … ကြေးဇူးပွုပွီး မသပေါနဲ့ “လို့ အျောပွနျပါတယျ။ Erick ဟာ သှေးတှေ ဒလဟောထှကျနတေဲ့ ဒဏျရာကို လကျနဲ့ဖိထားရငျး-
” သူမက ကြှနျတေျာ့ကို သတျဖို့ ကွိုးစားခဲ့တာပါ … အကူအညီ ချေါပေးကွပါ “လို့ ဘေးကနေ ရပျကွညျ့နသေူတှကေို အကူအညီတောငျးသလို၊ Sonia က ” မဟုတျဘူး … ရှငျ့ကို ကြှနျမ သတျဖို့မကွိုးစားခဲ့ဘူး … ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရှငျ့ကို ခဈြလို့ပေါ့ … ရှငျ့ကို ဘယျတုနျးကမှ ဒီလိုမလုပျခဲ့ဖူးဘူး … ရှငျက ကြှနျမကို အရမျးနှိပျစကျတယျ “လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
Erick က ” ဘုရားသခငျပဲ အပွညျ့အစုံ သိလိမျ့မယျ “လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။ မကွာမီမှာ ရဲကားတဈစီးရောကျလာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့မှာ အငျအားနညျးတဲ့အတှကျ ဓားထိုခံရတဲ့လူကို ဆေးရုံပို့ပေးဖို့မဖွဈနိုငျကွောငျး ငွငျးဆနျခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ နောကျထပျ တဈနာရီလောကျနမှေ လူနာတငျကား ရောကျရှိလာခဲ့ပွီး၊ လူနာကို ဆေးရုံတငျခဲ့တာပါ။
ဆေးရုံမှာ Erick ကို အရေးပျေါခှဲစိတျ ကုသပေးခဲ့တာကွောငျ့၊ အသကျကို ကယျတငျနိုငျခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ လောလောဆယျတော့ ဓားနဲ့ထိုးတဲ့ Sonia ကို ရဲက ဖမျးဆီးထားပွီး၊ စဈဆေးနတေယျလို့ သိရပါတယျ။ Erick ဟာ အသကျ(၂၉)နှဈအရှယျလို့ သိရပွီး၊ အခုတော့ ဆေးရုံမှာ စိတျခရြတဲ့အနအေထားလို့ သိရပါတယျ။
“အစိုးရ တာဝန်​ရှိသူများ ဝင်​​ရောက်​စစ်​​ဆေးသင့်​တဲ့ ဂျပန်​ဘုရား” – ထပ်မံရင်ဖွင့်သံတစ်ခု…!
သင်မသိသေးတဲ့ ကြက်ဥ တစ်နေ့ ၂လုံးစားခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးများ…!
This Month : 37219
This Year : 232617
Total Users : 591641
Total views : 2714130